2019 အတွက် တစ်ခွန်းတည်းသော မေးခွန်း? ကိုဖြေကြည့်ပါ။ | မာသင်
2019 အတွက် တစ်ခွန်းတည်းသော မေးခွန်း? ကိုဖြေကြည့်ပါ။
ပြန့်နှံ့နေတဲ့နေရောင်ခြည်တွေကို မှန်ဘီလူးဆိုတဲ့အရာနဲ့တစ်နေရာတည်းကို စုစည်းလိုက်ရင် မီးတောက်ဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။
ကျွန်တော် တို့အားလုံးရဲ့ဘဝမှာလဲ မီးတောက်ရဲ့အားအင်လို ပြင်းပြတဲ့ စိတ်ဆန္ဒအရင်းခံနဲ့ဖြစ်ချင်နေတဲ့ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်တွေ ရှိကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့်… ဟိုဟာလဲဖြစ်ချင်၊ ဒီဟာလဲ ဖြစ်ချင်၊ ပြန့်နှံ့နေတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေ နဲ့မီးတောက်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဘဝအတွက် အဖြစ်ချင်ဆုံးသောအရာတစ်ခု ကို ရွေးချယ်သတ်မှတ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတဲ့မှန်ဘီလူး နဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုဆိုတဲ့ သံဓိဋာန် ဆိုတဲ့အရာနှစ်ခု အကူအညီနဲ့တစ်ရက်ချင်းစီ.. တစ်နေ့ချင်းစီ လုပ်ဆောင်သွားမှ 2019 အကုန်မှာ မီးကုန်ယမ်းကုန်၊ အစွမ်းကုန် ထွန်းလင်းတောက်ပနိုင်တဲ့ အောင်မြင်မှုမီးတောက်တစ်ခု ကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိမှာပါ။
ဒါကြောင့်….ကိုယ့်ကိုယ်ကို “တစ်ခွန်းတည်းသော မေးခွန်း” ကို မေးကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ဒီ 2019 ဆိုတဲ့နှစ်မှာ .ကိုယ်ဖြစ်ချင်နေတဲ့အရာတွေထဲက၊
တစ်ခုတည်းသော…. အရာကို ရွေးပါဆိုရင် …….
ဘယ်အရာ ဖြစ်မလဲ ?
တွေးပါ။ ဆုံးဖြတ်ပါ။ မန့်ခဲ့ပါ။